नेपालमा ठुलो बजार सम्भावना भएको क्षेत्र – वासिङ व्यवसाय ! – HamroKatha
नेपालमा ठुलो बजार सम्भावना भएको क्षेत्र – वासिङ व्यवसाय !
व्यवसाय गर्नमा इच्छुक युवालाई कुमार श्रेष्ठको सन्देश, “अहिलेको समय लगानीले मात्र हुदैंन व्यवसाय गर्न सीप चाहिन्छ I अनि एक्लै काम गरेर व्यवसाय विस्तार गर्न सकिन्न त्यसैले व्यवसायलाई विस्तार गर्नु छ भने समुहमा काम गर्नै पर्छ I”
हाम्रो कथा २०७६ असार १८ गते १६:३९
नेपालमा ठुलो बजार सम्भावना भएको एक व्यवसाय हो – वासिङ व्यवसाय I यसमा के-कस्तो काम गरिन्छ भन्दा – गार्मेन्टमा बनेका नयाँ लुगा थप फिनिसिङको काम हो । गार्मेन्टमा सुरुवाती चरणमा बनेका यस्ता लुगा वासिङका लागि आउछन । वासिङमा यसलाई केमिकल हालेर धुने तथा नयाँ र आवश्यकता बमोजिमको रंग रोगन गर्ने काम गरिन्छ । यहि काम हो जसले उनीहरुलाई नाम र दाम दुवै मिलेको छ ।
पाँच पोखरी वासिङ सेन्टरका सहसञ्चालक कुमार श्रेष्ठ बताउँछन्, “प्रति पिस कपडा वासिङको मूल्य १० देखि १५ रुपैयाँ लिईन्छ I यसरी मासिक ८ लाख देखि १२ लाख जति आम्दानी हुन्छ I”
यति धेरै आम्दानी । कति गज्जबको व्यबसाय । यो व्यवसायमा ६ जनाको टिम छ । सुमन श्रेष्ठ, कुमार श्रेष्ठ, रविन श्रेष्ठ, ऋषिराम श्रेष्ठ, राकेश खड्का र जीवन तामाङ । सुमन श्रेष्ठ र राकेश खड्का बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका हुन । सवैले आ आफ्नै सिप र ज्ञान अनुसारका कम्पनीमा जिम्मेवारी लिएका छन ।
यो व्यवासय कुमार श्रेष्ठले १० वर्ष अघि सुरु गरेका हुन । एक भारतीय साथीसंग मिलेर उनले वासिङ व्यवसाय सुरु गरेका हुन । पछि आफै काम पनि सिके । जेनतेन ३ वर्ष आफै व्यवसाय चलाए ।
पछि एक्लै भएर काम गर्न निकै गाह्रो भयो । कम्पनी कसरी अघि बढाउने चिन्ता पर्न थाल्यो उनीमा । त्यहि समय उनले अन्य साथीहरु भेटे । लगानी थपियो । व्यवसाय अझै विस्तार भयो ।
अहिले त उनीहरुलाई काम भ्याई नभ्याई छ । गाम्र्रेन्टबाट लुगा ल्याउने र वासिङ गर्न । करिव २५ वटा गार्मेन्टबाट तयार हुने लुगाको वासिङको काम उनीहरुले गरीरहेका छन ।
कुमार श्रेष्ठ बताउँछन्, “यहाँबाट वासिङ भएका कपडाहरु महाबौद्ध र रन्जना गल्लिका स्टोरहरुमा जान्छ I यो वासिङ प्रविधि चीन र कोरियाबाट नेपाल भित्रेको हो I”
यि युवाहरुको सामुहिक सोचले वासिङ व्यवसाय आज हरेक दिन उकालोतर्फ लम्किरहेको छ । केहि लाखबाट सुरु भएको यो व्यवसायमा अहिले करिव १ करोड रुपैयाँ लगानी गरीसके । गार्मेन्ट उद्योगले उत्पादन गरेका सबै खालका कपडा धोईन्छ यहाँ ।
कुमार श्रेष्ठ आफ्नो भावी योजना बारे बताउँछन्, “अहिले हामी दैनिक ३००० पिस कपडाहरुमा काम गर्छौं I अबको केहि वर्षमा थप २/३ वटा मेसिन थपेर काम गर्नु छ I यसरी हामी वासिङको क्षेत्रमा नेपालको टप कम्पनीहरुमा पर्न तयारीमा छौँ I”
पहिले भन्दा अहिले वासिङ प्रविधिमा भिन्नता आएको छ । विश्वका विभिन्न खालका फेसनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न मिल्नेगरी उनीहरुले वासिङ प्रविधिलाई सुधार गरे । आयातित तयारी लुगासंग स्वदेशी गार्मेन्टमा बनेका लुगा पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने तहमा पुगेका छन्, कारण यहि नैं हो ।